Santiago Solari oo ku jees jeesay saxaafada sababa la xiriira Francisco Isco – Gool FM
Santiago Solari oo ku jees jeesay saxaafada sababa la xiriira Francisco Isco
Dajiye January 4, 2019
(Real Madrid) 04 Jan 2019.Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa ka soo hor muuqday saxaafada kadib barbarihii 2-2 ay xalay la galeen Villarreal.
Kulankan ayaa ka tirsanaa kulamadii isbuuca 17-aad ee horyaalka La Liga, kaasoo baaqi u noqday labada kooxood, sababa la xiriira in Real Madrid ay ku mashquulsaneyd tartanka koobka kooxaha aduunka ee FIFA Club World Cup.
Santiago Solari ayaa kulanka kadib wuxuu kala hadlay saxaafada, in Isco uu kulankan ku yimid qaab badal ah qeybta labaad, kadib markii uu ciyaarta ka saaray Luka Modric, iyo dhaawaca soo gaaray Gareth Bale.
“Villarreal waxay nagu sameesay cadaadis xoogan, anagana si la mid ah ayaan ku sameenay, laakiin kadib dhaawacii soo gaaray Gareth Bale iyo ka bixistiisa garoonka, waxay nagu yeelatay saameyn ah dhanka weerarka”.
“Hadii aadan kulanka soo afjarin xili horeba, waxaad la kulmi kartaa halis ah inaad gasho barbaro, maadaama ay kooxda iska lumisay fursado badan ay goolal ku dhalin kareen, sida xidigaha Marcelo iyo Vesquez, balse waxaan sii wadi doonaa dagaalka iyo loolanka aan ku jirno’.
Intaas ka dib tababare Santiago Solari ayaa ku maadeystay saxaafada kuwaasoo xili kasta la hor taagnaa weydiinta sababta uusan Icso u ciyaarin, wuxuuna markan yiri:
“Oo maanta majirto cid wax iga weydiisay Isco, runtii waa ciyaaryahan weyn, qor walba wuxuu mudan yahay qadarin iyo ixtiraam, wuxuu u ciyaaray kulankan si aad u wanaagsan”.
Ugu dambeyn Solari ayaa wax laga weydiiyay sababta uu u badalay Luka Modric wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Luka Modric wuxuu sameeyay wax wax walba, waana ku faraxsanahay arintaas, wuxuu ciyaaray runtii kulan cajiib ah”.
Wijnaldum oo hal arin ugu baaqay saaxiibadiis kooxda Liverpool, kadib guuldaradii kasoo gaartay Manchester City